sosegado : တားမြစ်ထားသော မြို့တော် Forbidden City
Posted by sosegado at 4/09/2010 10:53:00 PM
စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘေးနားမှာ ရှင်းပြနေသလိုပဲ၊ :)
ချင်သေးတဲ့မြို့ ကလေးဖြစ်နေလို့ ပါ-မော်စီတုန်းကိုစိတ်ဝင်
စားလို့ မဟုတ်ပါဘူး-The Last Empireရုပ်ရှင်ကြည့်
တဲ့လူနဲ့အင်ပါယာဘုရင်နဲ့ တူတဲ့ရုပ်ကိုရွေးနိုင်ခဲ့ လို
လဲမှု့ မရှိသေးဘူးပေါ့နော်-ဘုရင့်ပုလင်ကောတွေ့ ခဲ့
I was there in 2005! They were doing renovation ( re-painting ) for Olympic 08. It was hard to get by if you don't speak Chinese.
When I saw this, I know why my friend’s parents from Singapore weren't impressed with Mandalay palace.
ပုရီ ဇတ်လမ်းလေး ဆက်ရေးပါအုန်း
တရုတ်ကားတွေထဲမှာတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဒီနန်းတော်ကြီးတွေကို မြင်ဖူးနေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ဒီလောက်စုံစုံစေ့စေ့တော့မသိဘူးရယ်။ တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်ဗျ။ တရုတ်ရာဇ၀င်ကားတွေဟာ ဒီနေရာမှာ ရိုက်တာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်။ ဆက်တင်တွေနဲ့ပြင်ပြီးမှ ရိုက်လောက်တယ်။ ဒီလိုသမိုင်းဝင်နေရာကြီးမှာတော့ တရုတ်အစိုးရကလည်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ့မလား။ ထင်တာပြောတာနော်။ သီးခြားဆက်တင်တွေရှိရင်လည်း ပြောပြပါဦး။ ဗဟုသုတအလို့ငှာပေါ့ဗျာ။
တရုတ်နှင့် ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်၊ တီဗီ ဇာတ်လမ်းများရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို၊ ရိုက်ခွင့်ပြူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၊ ထင်ရှားတာက Beijing New Picture Film Co က Director Yimou Zhang ရဲ့ "Curse of the Golden Flower" ပါပဲ၊ Chow Yun Fat, Gong Li, Jay Chou တို့ပါဝင်ပါတယ်၊ တော်တော်များများက ဆက်တင်တွေပါ၊ computer graphics design တွေနဲ့ ဆက်တင်တွေက တော်တော်တူပါတယ်၊ Beijing Film Studo ရှိပါတယ် Ministry of Culture အောက်မှာပါ။
အင်ပါယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်၊ Min Min
နောက်ဆုံး အင်ပါယာ ပုရီ က မန်ချုးမဟုတ်လား၊ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။
တော်သေးတာပေါ့...သဲမုန်တိုင်း မမိခဲ့လို့... :D
အခုလို ဗဟုသုတလေးတွေကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်...အားလည်းနာတယ်...
ခင်လည်းခင်တယ်...အပိုင်း ၅လေး ဆက်ပါဦးလို့....
ဗဟုသုတကြွယ်လိုက်တာလို့ ဖတ်ရင်းချီးကျူးမိတယ်.. ။ တို့သာဆိုရင် ခရီးသွားလည်ပေမယ့် အခုလို ပြန်မပြောပြတတ်ဘူး..။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဓါတ်ပုံတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ တင်ပြပေးထားတာ.. ဂိုက်က လာရှင်းပြပေးနေသလိုပဲ.. တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရာဇဝင်နဲ့ လိုက်ဖက်လောက်အောင် အဆောက်အဦးတွေက ခမ်းနား လွန်းတယ်။
ပုံတွေကိုတော့ အခုမှ သေသေချာချာ ကြည့်ဖူး တော့တယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးမြင်ယောင်မိတယ်။
မြို့တော်ထဲက ဗဟုသုတတွေ တူးဆွသွားပါတယ်
ပုံလေးတွေနဲ့ ပြောပြတော့ ပိုသိလွယ်တယ်၊
ဗွမ်း ---- ဗွမ်း----ဗွမ်း------
ဂျစ်တူးကလည်း တည်ငြိမ်အေး ကိုခေါင်းကနေပြီးခြေထောက်အထိုကိုပက်လိုက်တယ်-
တည်ငြိမ်အေး ရဲ့ ရေစင်တွေကြောင့်ပေါ့-
ဟား - - -ဟား - - -ဟား
ဂလိုကိုး - - - -အေးပေါ့လေတနှစ်မှတခါကိုး--
ကျနော် ပို့စ် အသစ်တင်တာ မသိလိုက်လို့ လာဖတ်တာ နောက်ကြသွားတယ်.. တရုပ်ယဉ်ကျေးမှု့ ကလည်း အတော်မြင့်မားခဲ့တာကိုး.. ဖတ်လို့ကောင်းတယ် .. ပါးစပ်ရာဇဝင် တွေကိုလည်း သိချင်တယ်...
The Last Empire ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးကတည်းကဗျ-